BORIBORINTANY FAHENINA : Laharana fahavalo ny Kandidà Rakotoarimanana Maxime
Vita tamin’iny herinandro lasa iny ny fanaovana antsapaka ny laharan’ireo ho Kandida Solombavambahoaka nahafeno fepetra ao anaty bileta tokana. 24 mars 2019
Laharana faha-8 ny kandida Rakotoarimanana Maxime, natolotry ny “Vovonana IRD” na isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina ao amin’ny Boriboritany fahenina. Tsy niandry ela ny Kandida Rakotoarimanana Maxime sy ireo mpiara-dia aminy fa omaly ihany dia nampahafantatra izany laharany izany tamin’ireo solontenan’ny mponina eny amin’iny faritra iny izy sy ireo mpiara-miasa aminy. Rabenasolo Malala Dina Nirina, Rahobinorosoa Alinala ary Rahajarimanana Solofo Heriniaina no mpiray lisitra aminy. “Laharana fahavalo, tsy manam-pahavalo”, hoy izy nampiseho ny fahavononany sahady hiatrika ny fiatrehana ny hazakazaky ny fampielezan-kevitra izay hanomboka amin’ny 06 mey 2019 ho avy izao.
Kandida maro mpanohana
Tsy mandeha irery ny Kandida Maxime fa manohana tsy misy fepetra izao filatsahany izao ihany koa ireo antoko pôlitika sy fikambanana maro eny an-toerana izay efa niara-nisalaha taminy ihany tamin’ny fampandaniana ny Filoha Andry Rajoelina na tamin’ ny fihodinana voalohany izany na tamin’ny fihodinana faharoa. Isan’ny notsongainy tamin’izany ny avy ao amin’ny atoko “Freedom”, “Hiaraka Isika”, Avi, Antoko Maitso, MMM, Avana, sy ireo maro hafa. Fokotany 31 no mandrafitra ny boriboritany fahenina.
Ankoatra ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasa amin’ny orinasa tsy miankina dia mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamaroan’ny mponina eny an-toerana ary ireto farany aza no tena maro an’isa indrindra amin’izany. Misy amin’ireo fokontany 31 mandrafitra ny boriboritany fahenina ireo aza no tsy mbola tongan’ny jiro sy rano mihitsy.
Vonona hanatanteraka ny hetahetam-bahoaka
Manoloana izany indrindra dia nanambara ny Kandida Rakotoarimanana Maxime fa tsy hitazam-potsiny na hijanona ho mpanao lalàna fotsiny ihany ny tenany raha tonga eo amin’ny toerana maha Solombavambahoaka azy fa tsy maintsy hijery akaiky izay tena maharary ny vahoaka ary hanampy azy ireo araka izay azony atao.
“Efa teo foana, tsy hivadika aho ary hijanona ho mpanohana ny Filoha Andry Rajoelina hatrany”, hoy izy nanamafy ny maha kandidan’ny IRD azy.
Ankoatra ny volavolan-dalàna izay efa iombonany amin’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina dia isan’ireo hetaheta hatolony eny amin’ny Antenimieram-pirenena ihany koa ny fiadiana ny tombontsoan’ireo Sefo Fokotany izay nambarany fa tokony homena famatsiam-bola sy karama manokana satria izy ireny mihitsy no ivon’ny fampandrosoana, eo koa ny famerenana ny fanabeazana maha olom-pirenena ary ny fampiakarana ny lanjan’ny Antenimierampirenena mba tsy hanjakan’ny kolikoly sy ny “Malety” intsony.
Nambarany nandritra ny fanolorana azy omaly fa raha izy no voafidy hitondra ny tenin’ny vahoaka ao amin’ny boriboritany fahenina eny amin’ny Antenimierampirenena, Tsimbazaza dia atokany manontolo hanasoavana ny mponina eny an-toerana ny ampahefatry ny karamany mandra-pahatapitry ny fotoam-piasany.